Kormeerkii Waxbarshada Gobolka Nugaal oo si habsami leh uga socda Goobaha Waxbarashada Gobolka Nugaal – Ministry of Education in Puntland
Waxqabadkii Asbuuclaha ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Dowlada Puntland.
Kormeerkii Waxbarshada Gobolka Nugaal oo si habsami leh uga socda Goobaha Waxbarashada Gobolka Nugaal
By editor	/ March 27, 2018
27\_03\_ 2017- Malmahan ba saa ula socteen kormeerka Waxbrashada Gobolada kala ah Karkaar iyo Nugaal ayaa waxa ka socaday kormmeer lagu xoojinayo Tayada waxbarshada iyo sidii kor lagu qaadi laha tacliinta ubadkeena.
Degmada Garowe oo si habsami leh uga socda Kormeerka teamamkii ayaa shaqooyinkoodii loo idmaday waxay ka bilabeen dugsiyada jadwalka ugu jiray oo kala ahaa Dugsiga sare Al waxaa, Dugsiga sare ee Nugaal, Dugsiga Hoose dhaxe New Wabari, Dugsiga Hoose dhaxe Waabari.
Teamamka Garoowe ayaa waxaa hogaaminya Madaxa Manahijta ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare eng Nuur Ciiro iyo kormeeraha 1aad ee Gudoonka Waxbarashada Gobolka Nugaal Cumar Guure iyo qayb ka mid ah shaqaalaha dhexe ee Wasaaradda Waxbarsahada iyo Tacliinta sare.
Maamulayaasha Dugsiyada iyo Macalimiinta ayaa diyaarinaya liisaska Xaadiriska fasalada iyo tirada u fadhida fasal walba.
Kormeerkaan oo ka kooban labo qeybood oo ah Gobolka Nugaal oo ay kala hogaaminyaan Madaxa Waaxda Tayenta ee kormeerka Wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta sare C\_dalla Xuuxule iyo Madaxa Manahijta Wasaaardda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare Eng Nuur Ciiro ,ayaa si waaxda tayadhowrka waxbarashadu u ogaato halka ay waxbarasharadu marayso Gobolka Nugaal ayaa waaxda kormeerku u kala baxeen Degmooyinka hoos yimaada Gobolka Nugaal.